Ị bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ọkachamara na ụlọ ọrụ mmepụta ọkụ na China.Yourlite na Yusing bụ ụlọ ọrụ otu.Anyị azụlitela Yusing factory nke 7,8000 square mita na 2002, nke bụ ọkachamara ọkụ akụrụngwa na-eweta.
Ị na-enye ọrụ OEM/ODM?
Anyị nwere ndị otu R&D pụrụ iche na-elekwasị anya na imewe, injinia, elektrọnik, ngwa anya na nhazi, yana ngwọta ọkụ, yabụ na anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM na ODM.
Kedu nha ụlọ ọrụ gị na mpaghara gị?
Ụlọ ọrụ anyị nwere --Yusing, na-ekpuchi mpaghara 100,000 square mita.Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 800, ma nwee ike ịmepụta 1 nde oriọna ọkụ, 8 nde bulbs na 400,000 iju mmiri ọkụ kwa ọnwa.
Kedu ihe bụ isi ngwaahịa gị?Kedu ahịrị ngwaahịa ị nwere?
Anyị nwere ụdị 10, ụdị 60 na ụdị ngwaahịa karịrị 10,000.Ngwaahịa anyị bụ isi bụ ọkụ iju mmiri, ọkụ mgbada, ọkụ panel, batten azụmahịa, bọlbụ LED, tubes T8, nnukwu isi, ọkụ n'uko, oriọna, na ndị ọzọ.
Na anyị nwere ọtụtụ mmepụta ahịrị, gụnyere bulbs mmepụta akara, idei mmiri mmepụta akara, fixture ọkụ mmepụta akara, na ndị ọzọ.
Ndị ọrụ R&D ole ka ị nwere?
Anyị nwere ndị ọrụ R&D 45.Ndị otu R&D ọkachamara bụ isi ihe na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke Yourlite.Anyị na-azụlite nkà ọkachamara dị elu, na-eguzobe otu R&D ndụmọdụ nke ọma, na-etinye aka na ntinye ego R&D dị mkpa, na-elekwasị anya na mmepụta teknụzụ na nkwalite.Anyị etinyela ego dị ukwuu na R&D iji mepụta bọlbụ LED dị elu, ọkụ iju mmiri, ọkụ panel na ụdị oriọna ndị ọzọ.
Kedu ebe bụ isi ahịa gị?
E kesara ngwaahịa anyị na mba na mpaghara 60 na Europe, Australia, North America, South America, Middle East, wdg, meriri ntụkwasị obi na nkwado sitere n'aka ndị ahịa ụwa.
Ndị ahịa ole na-emekọ ihe ọnụ ka ị nwere?
Anyị ehiwela mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na nke kwụsiri ike na ụdị 62 na ndị na-eweta ihe karịrị 200, yana ndị ahịa 1280 na-arụ ọrụ n'ụwa niile.Anyị na Philips, FERON, LEDVANCE na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ama ama.
Ị nwere akụkọ nyocha nyocha ogo ụlọ ọrụ?
Ee, anyị nwere.Anyị gafere nyocha nke TUV na Intertek, wee guzobe mmekọrịta ụlọ nyocha na TUV.
Kedu asambodo ị nwere?
Anyị gafere ISO9001 àgwà njikwa usoro na ngwaahịa na-gbaara na ihe karịrị 20 mpaghara ụkpụrụ dị ka CE, GS, SAA, Inmetro.
Ebee ka m nwere ike nweta e-katalọgụ?
Ị nwere ike nweta e-katalọgụ kachasị ọhụrụ na webụsaịtị anyị, anyị ga-agbakwunye adreesị nbudata ahụ mgbe anyị malitechara ngwaahịa ọhụrụ.
Gịnị bụ oge nnyefe ngwaahịa?
Nọmalị, nnyefe oge bụ gburugburu 40 ~ 60days.Ihe dị iche iche, oge dị iche iche.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Yourlite?
Ọkachamma nke Yourlite gụnyere:
Ahụmịhe afọ 20+ na mbupụ.
Ngalaba R&D na-anabata ọrụ OEM gị
· Chepụta ngalaba na-eme ka gị na-ebi akwụkwọ na mbukota mfe na ọkachamara
· Ngalaba QC nwere ndị injinia 25 na-achịkwa mbupu ngwa ahịa gị n'ụkpụrụ gị
6 ụlọ nyocha maka ule 30
· Nye ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ ọrụ nchekwa nchekwa iji chekwaa nnukwu ego
· Nkwado ego
Anyị ga na-elekwasị anya mgbe niile na ihe ndị ahịa chọrọ, na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa dịkwuo mma, ma jiri ohere ọ bụla maka mmepe.Jiri ezi obi na-atụ anya ijere gị ozi.